Umkhiqizi Nomhlinzeki Wohlobo lwe-trailer yaseChina Xinneng
Iminyango namawindi: ingaphakathi linezindluzelekazi zomoya ezingenisa umoya ngaphandle kwewindi, iminyango, umnyango wesibili ohlangothini lwabasebenzi abasebenza.
Ukukhanyisa: isiqu esingaphakathi sokudonsa isibani esiphezulu, kwesokudla sinebhentshi lomsebenzi, futhi ifakwe isibani sedeski lomsebenzi, abasebenzi abasebenza kahle.
Ubufakazi obuzwakalayo: ukunikezwa kukagesi kwesiqu semoto, umnyango wokulinda konke ukusetshenziswa kokuhlobisa okuphindwe kabili, futhi kuhlonyiswe ibhodi elimunca umsindo, i-axle ye-themat, isakhiwo se-compact, iphephile futhi ithembekile. A) ngaphakathi.
Ukulwa nomlilo: izesekeli zokucisha umlilo zinezinto ezimbili.
Isethi ye-trailer yohlobo lwe-trailer inomklamo oyingqayizivele futhi omusha, ukuhamba ngamandla okukhulu, isikhungo esiphansi samandla adonsela phansi, amabhuleki aphephile, ukubukeka okwenziwe kahle futhi okuhle. Ukusetshenziswa kokukhethwa kokuma kokumiswa kwamaqabunga entwasahlobo kunengqondo, amandla aphezulu, kanye nokuqina okuhle. Isiteshi samandla kulula ukuhamba, siguquguquka ukusebenza, futhi sinokuqina komoya nokuphepha. Ibuye ifakwe ukubopha ngesandla, ukubopha umoya, ukukhanya kwangemuva komsila nezinye izinhlelo, ezihlangabezana nezidingo zokushayela umgwaqo omkhulu. It is kabanzi ezindaweni zokwakha, onguthelawayeka, ukwakhiwa kwezitimela nasezindaweni zesikhashana lapho kusetshenziswa ugesi.
1. Isakhiwo sokumiswa kwentwasahlobo seLeaf; ifakwe ngemishini yokupaka (ukubopha ngesandla) nomoya ukubopha okuxhunywe kugandaganda;
2. I-generator setha i-trailer isebenzisa ifreyimu yokudonsa uhlobo lwe-bolt-adjustable, efanelekile ogandaganda bezindawo eziphakeme ezahlukahlukene, ezinama-engeli amakhulu okujika nokuhamba okuphezulu;
3. Amakhona amane wohlaka anezinsiza ezisekela imishini, i-trailer ineplatifomu yokusebenza neyokulungisa ezinhlangothini ezintathu, futhi kunamaphedali emsileni.
RactUkuheha: Isebenzisa i-hook ehambayo, i-180 ° i-turntable, ukuqondisa okuguqukayo nokusebenza okulula.
②I-Brake: Ngesikhathi esifanayo, ine-interface ethembekile yokubopha umoya kanye nohlelo lwamabhuleki olusetshenziswayo ukuqinisekisa ukuphepha ngesikhathi sokushayela.
③Ukwesekwa: Ukuze kuqinisekiswe ukuzinza kwemoto yamandla ngesikhathi sokusebenza, ifakwe i-4R yedivayisi yokuxhasa ngemishini noma ye-hydraulic.
OIminyango namawindi: kunamawindi okungenisa umoya ngaphambili, iminyango eseceleni ngemuva, neminyango ezinhlangothini zombili ukuze opharetha angene futhi aphume.
Usayizi webhokisi lemoto: Usayizi webhokisi lemoto unqunywa ngokuya ngemininingwane. U-opharetha angahambahamba, okulungele ukusebenza nokugcinwa.
PeUkubukeka: Upende usebenzisa i-polymer polyurethane paint, umbala ungenziwa ngezifiso ngumsebenzisi, futhi ipayipi le-exhaust lithatha ukukhipha okuphezulu noma ukukhipha okuphansi ukuqinisekisa ukubukeka okuhle. Izinhlamvu nemihlobiso engaphandle kwebhokisi lemoto kungenziwa ngokuya ngezidingo zomsebenzisi.
Umlilo: Izicisha mlilo ezimbili zingahlonyiswa ngemoto. (Uyazikhethela)
Langaphambilini Iphaneli Yelanga
Olandelayo: Uchungechunge lwe-Volvo Generator